Islaamnimadu ma ka joojin kartaa qofka falalka xun? – Kaasho Maanka
Qofku in uu muslim yahay oo uu Eebbe rumaysan yahay miyuu xaaraanta isaga daayaa? Dadka soomaaliyeed maanta 100% waa ay tukadaan, haddana qofkii meel masuul ka noqdaa waa uu musuqmaasuqaa. Magaalooyinka soomaalida waxaa ku badan tuugada dadka furta oo qof telefoon sitaa habeenkii magaalo ma uu dhex mari karo. Waxaa jira dalal aan wax diin ah laga haysan oo uusan musuqmaasuq ka jirin, isla markaas dadka u dhashay aysan tuugnimo aqoon.
Haddaba in xaaraanta la iska daayo diin laga ma qaato ee ugu horrayn waa in ay dadka baahidu ka baxdaa. Waa in dastuurro ad adag oo xaaraanta xakameeya xilli dheer lagu socdaa. Waa in ay bulshadu tarbiyowdaa oo uu qof kastaa akhlaaq yeeshaa.
Akhlaaqda tusaale yar haddii aan ka sheego dhulka soomaalida carruurta ku dhaqani magaalooyinka aad bay u akhlaaq xun yihiin. Guryaha tarniiggooda sare iyo daaqadohooda habeen iyo maalin dhagxan baa lagu garaacaa, isla markaas ciyaalku qof meel iska maraya ayey tuuryeeyaan. Haddii aan daaqadaha bir laga dhigin ciyaalku dhagxan bay ku jebiyaan. Dadka fiidkii iyo galabtii deyrarka guryaha fadhiya dhagxan baa haleesha oo dad badan bay dhaawacyo ka soo gaaraan tuuryada carruurta. Baabuurta waa in ay dadka lihi waardiyeeyaan si aysan carruuri dhagxan muraayadaha ugaga jejebin. Waxa aynu aragnay dalalka badankooda in ay daaqadaha iyo derbiyadu dhalo yihiin, isla markaasna aysan jirin carruur dhagxisa oo jebisaa, baabuur ciyaal laga waardiyeeyaana ma ay jiraan. Qofkii qurbe ku raagey haddii uu dhul soomaaliyeed tago waa uu la yaabayaa akhlaaqda dadka dhulkii ku dhaqan. Sidaas darteed soomaalida tarbiyada ayaa ka xun, silic iyo fawdo ayeyna ku jiraan.
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 8th December 2018